အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ရန်ကုန်-၃- (၁၃ ရက် ဇွန် ၂၀၁၀ခုနှစ် တနင်္ဂနွေ) ဝက်သားမုန်ညှင်းချဉ်
နောက်တနေ့မနက်ကျတော့ အိပ်ရာထ နောက်ကျပါတယ် အဲ့တာနဲ့ မနက်စာကို စိတ်ထဲမှာ ကူးထားတဲ့ အစာအဟာရလေးတွေမမှီဝဲရတော့ဘဲနဲ့ ဖြစ်သလိုပဲ စားဖြစ်ဖို့အကြောင်းက ဖန်လာပါတယ်။ အရင်ရုံးမှာ အတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ လုပ်နေဆဲ ညီမလေးတွေကို သူတို့အတွက် ဝယ်လာတဲ့ ကော်စမက်တစ် လက်ဆောင်လေးတွေ သွားပေးတော့ သူတို့နဲ့ အတူတူပဲ မနက်စာကို ၁၂ နာရီခွဲမှာ နေ့လည်စာနဲ့ ပေါင်းစားရပါတယ် ရုံးက စံရိပ်ငြိမ် မှတ်တိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲ့နားက အိုင်တီ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ပဲ ဖြစ်သလိုလွေးလိုက်ပါတယ် ကြည့်ကြပါ .......ဖြစ်သလိုပဲ စားနေရတဲ့ တီ့ဘဝ သနားစရာ .....နော်
Posted by တီချမ်း at 9:44 PM
Labels: တီချမ်း ခရီးသွားခြင်း, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အရွက်ကြော်, အသားကြော်
Rita July 10, 2010 at 9:59 PM
ရှမ်းဝက်အူချောင်းကို မြင်ရတာ စိတ်နာလိုက်ထှာ
(စကားမစပ် Addy ညီလေးက ချောတယ်နော်)
Mon Petit Avatar July 10, 2010 at 10:17 PM
I think I can live with your grandmother, as I am too picky about meat. Plus, I don't like onion, and spring onion.
sexy July 11, 2010 at 8:17 AM
ဟယ် တီချမ်း ညီက အဆော်တကင်လေးတော့။ နှုတ်ခမ်းလေးက ဖူးနေတာပဲ။ ရှလွတ် :P
အသော်တကစ်လေးနော်.. ရင်တွေခုန်လိုက်တာကွယ်။ ဟင်း ဟင်း ဟင်း
ဝက်အူချောင်းပုံက EEတုံးနဲ့ တူတယ်။ ဟွန့် နောက်တာ!! :D
တီချမ်းညီကို ကျိတ်ပြီး ကြော်တကိုက်သွားသူ
ချစ်ကြည်အေး July 11, 2010 at 8:31 AM
တီချမ်းရေ...လဘက်ရည်ခွက်တွေ သေးလာလို့ ၂ခွက်သောက်ရတယ်လား...ဟ ဟ ၊ တို့ဟူးနွေးကြိုက်တယ်။ ဝက်သားမုန်ညှင်းချဉ်ဆို အမက ဝက်သား ၃ထပ်သားကို အပြားလိုက် ပါးပါးလှီးပြီးချက်တာ၊ ဝက်သားက အဆီနဲနဲပါတော့ မုန်ညှင်းချဉ်နဲ့ ပိုလိုက်ဖက်တယ်၊ ချက်စားကြည့်...:))
Leo July 11, 2010 at 10:02 AM
စားချင်တယ်။စားချင်တယ်။ အစာအိမ်ဖြစ်လို့ အဖက်မစားရပါဘူးဆိုမှ သူကအစားအသောက်တွေပဲဇွတ်တင်။
တီရေ အစာအိမ်ဖြစ်တာဆေးရုံတက်လိုက်ရတယ်။ သူများမြို့မှာ ဒေတာသွားကောက်တုံးဖြစ်တာလေ။ ဟိုနေ့ကတီ့ကို ဂျီတော့မှာပြောပြမလို့ကို မအားလို့မပြောရတာ။ နေမကောင်းပေမယ့် နေ့တိုင်းလာလည်ပါတယ်။ တီကအခုမှအသစ်တင်တာကိုး။
အန်တီချမ်း July 11, 2010 at 3:54 PM
ဘာလို့ စိတ်နာတာလဲ ဒေါ်ရီတာ စားချင်ရင်ပို့လိုက်မယ် ပုံကတော့ ဆက်ဆီပြောသလိုဖြစ်နေပေမယ့် အရသာတော့ ကောင်းလေစွပဲ
ရှင်လဲနော်ဆက်ဆီ နဲ့အပြိုင် ခိခိခိ အက်ဒီ ညီ က ချောတယ်ဆိုတော့ အက်ဒီက မချောဘူးပေါ့လေ ဟွန်း..............
မွန်ပတိရေ အမြဲလာတာကျေးဇူးပါ ဘယ်သူမှန်းမသိပေမယ့် လာလာအားပေးနေတာ အမြဲတွေ့တယ် အရင်ကတော့ ရေခဲတောင်လို့ထင်နေတာ
မချစ်...ဟုတ်တယ် အဲ့လို ဝက်သား သုံးထပ်သား ကို ပါးပါးလှီးပြီးကြော်တာ လဲရှိတယ် အဲ့တာကိုတော့ ပြည်တော်ပြန် ဝက်သားလို့ ခေါ်တယ် အဲ့တာ က နောက်တခွက် မတူဘူး မုန်ညှင်းချဉ်နဲ့ပဲ ချက်ကြတာ
အဲ့တာ က ပြည်မ ဘက်က ခုဟာက ယူနန်ဘက်ကပေါ့ အဲ့လို
လီယို ပြန်ရောက်ရင် ထမင်းလာစားပါ တီ နလန်ထ စာတွေ ချက်ကျွေးမယ်
ပီတိ(စိတ်ပညာ) July 11, 2010 at 7:56 PM
လာငမ်းသွားတယ်။ (အစားအသောက်တွေပြောပါတယ်) ဟိဟိ ။
စကားမစပ် အစွဲ က စလုံးနဲ့ စွဲပါတယ်။
အန်တီချမ်း July 11, 2010 at 8:53 PM
သိတယ် ညည်းခုတလော စာလုံးပေါင်းတွေ လိုက်ပြင်နေခိုင်း တာ ခိခိ
သက်ပိုင်သူ July 13, 2010 at 9:01 PM
Anonymous January 2, 2011 at 7:01 PM
A yan Kyite dar pae... A kon lone ko kyite dae, thi lar ?
Sar chin lite dar......
Hehhee.....Kuu ma myin buuu dar so dot lay.....
Cook dar pyaw par dae naw...
TC April 15, 2012 at 12:13 PM
ဒီနေ့ တီချမ်းပြောတဲ့ ဟင်းနည်းအတိုင်း ချက်စားလိုက်တယ်.. ကောင်းမှကောင်း..